သူငယျခငျြးကိုလိုးတဲ့စာ – My Blog
ငါ သိပျ အထီးကနျြတယျ သူငယျခငျြး။ ဒါကွောငျ့နငျ့ကို ငါ ကိုယျခငျြးစာတယျ” လို့ ကြှနျတျော ပွောလိုကျတော့ နှယျနီက ကြှနျတေျာ့ကို အကွောငျသား ကွညျ့ နတေယျ။ “နငျက အထီးကနျြရအောငျ ရညျးစားကွီး ငုတျတုတျနဲ့လေ။ ငါက အသညျးကှဲနတောဟဲ့” “ငါ့ရညျးစားက နိုငျငံခွားမှာလေ။ ကွာပွီဟ။ ငါက ရညျးစားရှိတယျလို့ နာမညျပဲရှိတာ။ ငါပွောတာ နငျသဘောပေါကျပါတယျ နှယျနီရာ”
ကြှနျတျောနဲ့ နှယျနီက ငယျငယျကတညျးက မောငျနှမလို နခေဲ့တဲ့ သူငယျခငျြးနှဈယောကျပါ။ ကြှနျတျောက ငယျငယျကတညျးက ရညျးစားရှုပျတယျဆိုပမေဲ့ နှယျနီ့ကိုတော့ မောငျနှမလိုသာ ဆကျဆံတယျ။ ယောကငြ်္ားလေး သူငယျခငျြးတှလေိုပဲ ခဈြတယျ။ ဟိုကောငျတှနေဲ့ ဘောလုံးသှားမကနျဖွဈတဲ့ နဆေို့ နှယျနီ့ အိမျသှား၊ သူကြှေးတဲ့မုနျ့စား၊ ခှကွေညျ့နကြေ။ နှယျနီက ကြှနျတေျာ့ကို ကွိုကျနတေယျလို့ ဘျောဒါတှကေ နောကျကရြငျတောငျ ကြှနျတျောက ဘုကွညျ့ ကွညျ့တာ။ ကြှနျတျော တခွားမိနျးကလေးတှနေဲ့ ရှုပျပမေဲ့ သူ့ကိုတော့ ကြှနျတေျာ့ရဲ့ အမြားကွီးတှထေဲက တဈယောကျ အဖွဈမခံပါ။ သူ့အပျေါထားတဲ့ ကြှနျ တေျာ့ အခဈြက ဒီလို။ သူ့အမနေဲ့လညျး ကြှနျတျောက ခငျတယျ။ ခုတော့ ကြှနျတျောတို့နှဈယောကျက ကလေးတှမေဟုတျကွတော့။ နှဈယောကျလုံး အသကျ ၃၀ နီးပါး။ ကြှနျတျောက အိုငျတီ ကုမ်ပဏီတဈခုမှာ ဆော့ဖျဝဲအငျဂငျြနီယာ။ နှယျနီက နာမညျကြျော ဟိုတယျတဈခုမှာ ကောငျတာထိုငျသူ။ receptionist ပေါ့။
ငယျငယျကလောကျ မတှဲဖွဈတော့။ တခါတလေ အှနျလိုငျးက စကားပွောဖွဈတယျ။ ကလေးတှလေညျး မဟုတျကွတော့ သူ့အိမျ ဝငျခငျြတိုငျး ဝငျနတော လညျး မသငျ့တျောတော့။ ပွီးတော့ ကြှနျတျောကလညျး ဇာတိမွို့ငယျလေးက ပွောငျးသှားပွီလေ။ သူနဲ့ ကြှနျတျောနဲ့ကွား နောကျထပျ အလှမျးကှာရတဲ့ အကွောငျးရငျး နောကျတဈခုက သူ့ရညျးစားပါ။ ဒီကောငျက တျောတျောဂကြွေီးတယျ။ နှယျနီပဲ မိတျဆကျပေးလို့ သိတာပါ။ ကြှနျတျောကတော့ ကိုယျ့ သူငယျခငျြးရဲ့ဘဲ ဆိုပွီး ခငျခငျမငျမငျ နပေါတယျ။ ကြှနျတျောနဲ့ ဖကျလဲတကငျးနတော ကွိုကျပုံမပျေါ။ ဒီကောငျ စိတျမခလြညျး မခခြငျြစရာ။ နှယျနီက ငယျ ငယျကတညျးက မိုကျတာ။ ခုလို အသကျသုံးဆယျ ဆိုတော့ တငျတှေ ရငျတှကေ တျောတျောလှတယျ။ မကျြစိထဲမွငျအောငျ ပွောရရငျ ဗမာကွိုကျ ခပျ တဈတဈ ငါးရံ့ကိုယျလုံးမြိုး။ ကြှနျတေျာ့ သူငယျခငျြးမ မကျြနှာကတော့ သိပျအလှကွီးမဟုတျပါ။ ဒါပမေဲ့ ရုပျဆိုးတဲ့အထဲလညျး မပါဘူး။
တဈရကျနှယျနီ ဖုနျးဆကျတယျ။ ဖုနျးကို ကြှနျတျော စပွီး ဖွကေတညျးက ငိုတော့တာပဲ။ နာရီဝကျလောကျကွာမလားပဲ ကြှနျတေျာ့အထငျ ။ ကြှနျတျောက “ဟဲ့ သူငယျခငျြး ဘာဖွဈတာလညျး ငါ့ကို ပွောစမျး။ နငျ့အမေ နမေကောငျးဘူးလား ” ဘာညာ မေးတာပေါ့။ နှယျနီမ က ဟငျ့အငျး လို့ပွောပွီး ငိုပဲ ငိုနေ တယျ။ ပွီးတော့မှ “ငါ့ကို သူထားသှားပွီဟယျ” လို့ တဈခှနျးပွောတယျ။ သနားပါတယျ။ သူငယျခငျြး အပြိုကွီးမမတော့ ရညျးစားဦးမှာ ခံရရှာပွီ။ ကြှနျတျော ကတော့ သူပေါ့ပေါ့ ပါးပါးဖွဈအောငျ ပွနျပွောပေးပါတယျ။ “အမယျလေးဟယျ ရညျးစားနဲ့ ပွတျတာမြား။ ငါဆို ခဏခဏ ရညျးစားထား၊ ခဏခဏ ပွတျ နဲ့ အသဲကှဲတာ ရိုးနပွေီ အေးဆေးပေါ့ နှယျနီရာ” “မတူဘူးဟဲ့။ ငါကမိနျးကလေး” “မိနျးကလေးတှေ ဘာတှေ လုပျမနနေဲ့။ ဒီတဈပတျ ရုံးပိတျရကျ ငါ့ဆီလာခဲ့။ ငါတို့ သူငယျခငျြးနှဈယောကျ ငါ့အခနျးမှာ ဟော့ပေါ့ လုပျစားကွမယျ။ နငျစိတျပွလေကျပြောကျပေါ့”
တကယျဆို နှယျနီ့ကို ကြှနျတျော မချေါခဲ့သငျ့ပါဘူး။ ဒီလိုသာ မချေါခဲ့ဘူးဆိုရငျ နှယျနီလညျး ကြှနျတေျာ့ရဲ့ တိတျတိတျပုနျး ရညျးစား အဖွဈ မကျြနှာငယျရမှာ မဟုတျသလို၊ ကြှနျတျောလညျး ကြှနျတေျာ့ ခဈြသူကို သစ်စာဖောကျဖွဈမှာ မဟုတျဘူး။ သူဟိုတယျမှာ နားရကျရတော့ ကြောကျမွောငျးက ကြှနျတေျာ့ တိုကျခနျးကို ဟငျးခကျြစရာတှနေဲ့ ရောကျလာတယျ။ သူတံခါးခေါကျတော့ ကြှနျတျော အိပျရာထဲမှာ ကှေးကောငျးတုနျး။ နှယျနီ့ကို ကြှနျတျော အခနျးတံခါး ထဖှငျ့ပေးလိုကျပွီး အိပျယာထဲ ပွနျဝငျခှနေလေိုကျတယျ။ နှယျနီက ဝယျလာတဲ့ ဟငျးခကျြစရာတှကေို ကြှနျတေျာ့ရခေဲသတ်ေတာလေးထဲ သှားထညျ့နတေယျ။ နောကျဖေးမှာ ကတောကျ၊ ကတောကျနဲ့ ဘာတှလေုပျနမှေနျးမသိ။ ကြှနျတျောကတော့ အိပျရာထဲ ဆကျကှေးနလေိုကျတယျ။
“နငျ့ကို ငါမနကျကတညျးက ဖုနျးဆကျထားတယျ။ ခုထိ အိပျရာထားမှာပဲလား ငစညျ ရဲ့။ ထတော့ဟာ” ။ နှယျနီက ပွောပွောဆို ဆိုနဲ့ အခနျးဝမှာ ရပျနေ တယျ။ မနကျခငျးနရေောငျ ဖွာကနြခြေိနျမှာ သူ့ကိုယျလုံးအလှကလညျး ထငျးနတောပဲ။ ငါးရံ့ကိုယျလုံး တဈတဈလေးကို မွနျမာဝတျစုံဝတျထားတော့ ကိုယျ လုံး အလှကပျေါ တာပေါ့။ ရညျးစားနဲ့ ပွတျထားတဲ့ သူငယျခငျြးမ တောငျ့တောငျ့ဖွောငျ့ဖွောငျ့ကွီးရဲ့ ကိုယျလုံးကို ခံစားနရေငျး နိုငျငံခွား ရောကျနတေဲ့ ကိုယျ့ ရညျးစားကိုယျတောငျ သစ်စာဖောကျခငျြခငျြဖွဈလာတယျ။ “ဟဲ့ မထ သေးဘူးလား။ ငါလာစောငျဆှဲလှနျရမလား” “မလုပျနဲ့ မလုပျနဲ့ ထပွီထပွီ” နှယျနီက ပွောလို့ရတာမဟုတျ။ ငယျငယျတုနျးကလိုဆိုပွီး စောငျဆို ဇကျကနဲ လာဆှဲလှနျမှဟုတျပဖွေ့ဈမယျ။ သူ့ကိုယျလုံးနဲ့ တငျသား၊ ရငျသား ကောကျကွောငျးတှေ ကို ကွညျ့ပွီး ကြှနျတေျာ့ ပစ်စညျးက ဒိနျးမတျ ဖွဈနတော။ ကမူးရှူးထိုးထပွီး သူ့ဘေးကနေ အခနျးအပွငျကို မကျြနှာသဈ ရမေိုးခြိုးဖို့ ထှကျလိုကျတယျ။ သူ့ နားက အဖွတျမှာ တဈသကျလုံး သူ့အပျေါ သနျ့ရှငျးလာတဲ့ ကြှနျတေျာ့လကျ စပွီးတော့ ကစားတော့တာပဲ။ “အိပျကောငျးခွငျး မအိပျရဘူး။ အသားမဲမ” ဆို ပွီး ပါးကို လိမျဆှဲလိုကျတာ။ စိတျထဲမှာ ဘယျလိုကွီး ဖွဈသှားလဲမသိ။ ရမှေေးနံ့နဲ့ မိနျးမတဈယောကျရဲ့ ခြှေးနံ့၊ ကိုယျသငျးနံ့ ရောနတေဲ့ ရနံ့က ကြှနျတေျာ့ကို ဖြားယောငျးတာ ဖွဈမယျ။ သူကတော့ သတိတောငျ ထားမိရဲ့လား မသိဘူး။
“ခှေးကောငျငစညျရေ လူအသားဟဲ့ နာတယျ။ ဒါနဲ့ နငျ့ တီရှပျအဟောငျး တဈထညျ ငါ့ကို ပေးစမျးပါ။ ငါ့အကငြ်္ီ ပူတယျ။ နငျရခြေိုးနတေုနျး ငါလဲထားမလို့” “ငါ့ ဗီရိုထဲမှာ ရှာလိုကျ” ကြှနျတျောရခြေိုးခနျးထဲရောကျမှ သကျပွငျးခနြိုငျတယျ။ ကိုဖိုးထောငျ ဖွဈနတေဲ့ ကြှနျတေျာ့ ပစ်စညျးကို နှယျနီမ မမွငျအောငျ အတငျး ပေါငျကွားညှပျပွီး လိနျကဈြကဈြနဲ့ ထှကျလာရတာကိုး။ ကြှနျတျောက ငရှုပျလို့သာ ပွောတာပါ။ အလုပျတှကေမြား၊ ခရီးက ဆကျတိုကျထှကျရ။ အ ရငျက ခြိနျးခြိနျး ခဈြနကွေ ရညျးစားကလညျး နိုငျငံခွားသှားနတော ၂ နှဈရှိပွီ။ ပွောရရငျ လိငျရမကျအာသာအပွညျ့ အသကျ ၃၀ တနျး ယောကငြ်္ားတဈ ယောကျပါ။ အရငျက ဒီလောကျထနျနရေငျ လကျနဲ့ ဂှငျးတိုကျရငျး စိတျဖွလေိုကျတာပဲ။ ခုလညျး ရခြေိုးခနျးထဲမှာ လုပျမလို့ ကြောကျခဲလို မာနတေဲ့ ညီလေး ကို ကိုငျလိုကျသေးတယျ။ ဘာလို့မှနျးတော့ မသိဘူး တဈခုခု လုပျရတော့မယျလို့ စိတျထဲထငျနတောမို့ မလုပျလိုကျတော့ဘူး။ ရကေိုပဲ တဝုနျးဝုနျးခြိုးလိုကျ တော့တယျ။ ကွညျလငျလနျးဆနျးသှားတာပဲ။
ကြှနျတျော အဝတျအစားလဲပွီးတော့ နှယျနီ့ကို အျောချေါလိုကျတယျ။ ငါဝရနျတာမှာ ငစညျရလေို့ ဖွနျထူးတယျ။ ကြှနျတေျာ့တီရှပျပှပှကွီးထဲမှာ ခဈြစရာ ကောငျးနတေဲ့ နှယျနီမ က ဝရနျတာမှာ။ ပိတျရကျ လမျးပျေါမှာ ဘောလုံးကနျနတေဲ့ ကလေးတှကေို ငေးနတေယျ။ ကြှနျတျောဝရနျတာကို လိုကျသှားလိုကျ တယျ။ “ဟဲ့ ငါနငျ့ဖို့ မုနျ့ဟငျးခါး ဝယျလာတယျ။ အုပျဆောငျးထဲမှာ သှားစားလိုကျ” “ဘာလို့လညျးမသိဘူး မစားခငျြဘူးဟာ” ဘယျစားခငျြပါ့မလဲ။ ကြှနျ တေျာ့အာရုံက ရမကျဆန်ဒတှနေဲ့ သှေးတိုးနတောကိုး။ ဝရနျတာသံပနျးဘကျကို လှညျ့ပွီး ကြောပေးထားတဲ့ နှယျနီ့ကို ကြှနျတျော နောကျကနေ ခါးကို ဖကျ ထားလိုကျတယျ။ “ငါတို့နှဈယောကျလုံး အထီးကနျြတာ နငျသိပါတယျနှယျနီရာ၊ ငါ့ကို အဖျောလာလုပျပေးတာ ကြေးဇူးတငျပါတယျ” ကြှနျတျောဘာတှေ ပွောမိမှနျးမသိ။ စိတျထဲရှိရာ ပွောပွီး၊ ဖွဈခငျြရာဖွဈ ဆိုပွီး ဖကျခလြိုကျတာ။ ဒါပမေဲ့ သူမရုနျးပါဘူး။ “နငျသူ့ကို သစ်စာရှိရမယျလေ။ ငစညျရဲ့” တဲ့ ဒါပဲပွော တယျ။ ပွီးတော့ ဖကျထားတဲ့ ကြှနျတေျာ့လကျကို အပျေါကနေ အုပျကိုငျထားတယျ။ သူ့ရမှေေးနဲ့ ခြှေးနံ့ပေါငျးထားတဲ့ ကိုယျသငျးနံ့က ကြှနျတေျာ့အတှကျ ရူးမ တကျပဲ။ အောကျက ပစ်စညျးကလဲ အရေးထဲ ထိနျးကနဲ ထောငျတကျလာလို့ နောကျကို ဆုတျထားရသေးတယျ။ ဖကျသာဖကျထားရတယျ ကုနျးကှကှကွီး။ သူ့ လကျကို ဆှဲပွီး အခနျးထဲ ပွနျဆှဲချေါလာလိုကျတယျ။
မကျြနှာခွငျးဆိုငျ ပုံစံနဲ့ ကြှနျတျောတို့နှဈယောကျ တိတျတဆိတျကွီးကို ရပျနကွေတယျ။ ဘာမှ မပွောဖွဈ။ ကြှနျတေျာ့နှာခေါငျးဝက သူ့ နဖူးထားမှာ။ ဖွဈခငျြ ရာဖွဈဆိုပွီး နောကျတဈဆငျ့ လှုပျရှားတယျ။ နဖူးလေးကို နမျးလိုကျတာ။ ခကျကတော့ ခါးကို ဖကျထားလိုကျတာပေါ့။ မေးစကေ့နေ သူ့ခေါငျးကို မော့ပွီး နူ တျခမျးကို အသာနမျးလိုကျတယျ။ သူခေါငျးယမျးပွီးရှောငျလိုကျတော့ လညျပငျးကို သှားထိတယျ။ “သူငယျခငျြးရယျ နငျ့ကို ငါ ငယျငယျကတညျးက ခဈြနေ တာ လူတိုငျးသိပါတယျ။ ငါ့ကို မမွူဆှယျပါနဲ့တော့။ နငျ့မှာလညျး လကျထပျမယျ့ မိနျးကလေးနဲ့ပါ မစညျရယျ။ ငါ့ကို မခဈြနိုငျလညျး တနျဘိုးလေးထားပါ ဟာ” လို့ ပွောတယျ။ ကြှနျတေျာ့ရငျခှငျထဲ ခေါငျးလေး ဝငျပွီး တသိမျ့သိမျ့နဲ့ ငိုနတေယျ။ ကြှနျတေျာ့နရောမှာ ခငျဗြားတို့ဆို ဘာလုပျမလဲ။ လူကလညျး ထနျ နပွေီ။ ရငျခှငျထဲက တဈသကျလုံး မောငျနှမလို နလောတဲ့ သူငယျခငျြးက သူ့ကို မမွူဆှယျပါနဲ့လို့ တောငျးပနျနတေယျ။ ပွီးတော့ ပွောသေးတယျ။ ကြှနျ တေျာ့ကို ခဈြသတဲ့။ ကြောကိုလညျး သိုငျးပွီး ဖကျထားသေး။ ကြှနျတေျာ့ တဏှာက ကြှနျတေျာ့ ဆငျခွငျတုံတရားကို နိုငျသှားပွီဆိုတာ သိတော့ ကြှနျတျော နောကျကသြှားပါပွီ။
“ကြေးဇူးပွုပွီး ဘာမှ မပွောပါနဲ့တော့ သူငယျခငျြးရယျ” လို့ တုနျတုနျယီယီ အသံကွီးနဲ့ ပွောလိုကျပွီး သူ့မေးဖြားကို ဆကျကနဲ ဆှဲမော့လိုကျတယျ။ အောကျ က ညီလေးကလညျး မာဂလောငျနပွေီ။ သူ့ဆီးစပျကို သှားထောကျနတော။ နှယျနီမ က ရီဝဝေနေဲ့ မော့ကွညျ့တယျ။ အိထှေးနတေဲ့ သူ့နူတျခမျးကို အာသာ ပွငျးပွငျးနဲ့ ကြှနျတျောစုပျခလြိုကျတယျ။ ကြှနျတျောသိပျတကျမကျခဲ့ရတဲ့ မိနျးမတဈယောကျရဲ့ ကိုယျသငျးနံ့။ အရာအားလုံးဟာ အရောငျတှေ တောကျလာ သလို။ ဘေးဘီကို ဘာမှမသိတော့ဘူး။ ကြှနျတေျာ့မကျြလုံးတှေ မှိတျထားတာတောငျမှ အရောငျတှေ တဖွကျဖွတျလငျးနတေယျ။ သူ့အပျေါနူတျခမျးလေးကို ဖွညျးဖွညျးလေး မြှဉျးစုပျနတေုနျး၊ နှယျနီ က ကြှနျတေျာ့ အောကျနူတျခမျးကို ပွတျမတကျကို ပွနျစုပျနတေယျ။ အေးပေါ့။ ကြှနျတေျာ့သူငယျခငျြးလညျး ရညျးစားတဈယောကျ ပွတျပွီးပွီဆိုတော့ နူတျခမျးခငျြးနမျးတာလောကျတော့ ကြှမျးကငျြရောပေါ့။ သူ့ပါးစပျထဲ ကြှနျတေျာ့လြှာကို မထိတထိ ထညျ့ ပေးလိုကျတယျ။ သူ့သှားလေးတှကွေားထဲ ဝငျပွီး သူ့လြှာကို သှားထိလိုကျတာ။ ခဏနတေော့ သူ့လြှာကြှနျတေျာ့ ပါးစပျထဲ ပွနျရောကျလာတယျ။ ပိုငျ လောကျပွီဆိုမှ သူ့လြှာလေးကို စုပျထညျ့လိုကျတာ။ နှယျနီဟာ အသားတှကေို တုနျလို့။ ခငျဗြား ရညျးစားကိုဖွဈဖွဈ၊ ခဈြသူကို ဖွဈဖွဈ လြှာခွငျးစုပျတာ စမျးကွညျ့သငျ့တယျ ကိုယျ့လူ။ ကြှနျတျောတို့ သူငယျခငျြး နှဈယောကျရဲ့ နှာဘူးအနမျးကတော့ နာရီဝကျလောကျကို ကွာမယျ။ သူ့နားရှကျကို လြှာနဲ့ ကလိ တော့ “ယားတယျ စညျသူရယျ” လို့ ညညျးသံလေးနဲ့ ကနျ့ကှကျနတေယျ။ ခကျတာက မရုနျးတာပဲ။ မရုနျးရငျ ကြှနျတျောကတော့ ဆကျလုပျပွီးသားပဲ။
လညျပငျးကို လြှာလေးနဲ့ ရကျပေးလိုကျတယျ။ ကြှနျတေျာ့ ဆံပငျ ကို ကိုငျ၊ အသာလေးဖှပေးပွီး “ခဈြတယျ။ သူငယျခငျြးရယျ” လို့ နှယျနီညညျးနတေယျ။ ကဲ မရတော့ဘူး ဟေ့။ သူဝတျထားတဲ့ ကြှနျတေျာ့တီရှပျ ပှပှကွီးကို လှနျပွီး ခြှတျပေးလိုကျတယျ။ မနကျက အဝတျလဲထားတော့ ဘရာ ကိုပါ ခြှတျထားတယျ ထငျတယျ။ ဘုရားသခငျ…. သိပျလှတဲ့ ရငျသားပါလား။ ကွီးတာလညျး မဟုတျ၊ သေးတာလညျးမဟုတျ။ ဆူဖွိုးနတေဲ့ ရငျသား။ ကြှနျတျောနမျးဖို့တောငျ မေ့ နအေောငျ ရငျတှေ တဒိုငျးဒိုငျးခုနျနတေယျ။ နို့သီးခေါငျးတှဟော ပနျးရောငျတော့ မသနျးတော့ဘူး။ အေးပေါ့လေ သူ့ဘဲက စို့မှာပေါ့။ ကြှနျတေျာ့သူငယျခငျြး ကို ပဈသှားတယျဆိုတဲ့ ငတိကို “စောကျသုံးမကတြဲ့ကောငျ” ဆိုပွီး စိတျထဲက ကြိနျဆဲလိုကျတယျ။ “ဘာတှေ လုပျနတောလညျး စညျသူရယျ” ဆိုပွီး ကြှနျ တေျာ့လကျဖြားတှကေို သူညှဈတယျ။ ထုံးစံအတိုငျး မရုနျးပါဘူး။
လိငျကိစ်စကို လူသား၏ အခွခေံလိုအပျခကျြတဈခုအဖွဈသာ သဘောထားသော အနောကျနိုငျငံအခြို့မှာ friends with benefit လို့ ပွောကွတဲ့ လိငျပိုငျး ဆိုငျရာ ဆကျဆံရေးတမြိုးရှိတယျ။ မိတျဆှေ သူငယျခငျြး လို ခငျခငျမငျမငျ ခဈြခဈြခငျခငျ နကွေတယျ။ တဈယောကျကို တဈယောကျ အပွနျအလှနျကူညီ ကွတယျ။ ကွုံရငျ ကွုံသလို တူတူအိပျကွတယျ။ ခတျေစကားနဲ့ ပွောရရငျတော့ ထနျရငျ ထနျသလို အကွောငျးညီညှတျရငျ ဘောငျးဘီခြှတျကွတယျပေါ့ လေ။ ဒီလို လိငျပိုငျးဆိုငျရာ ဆကျဆံရေးကို ရှေးရိုးစှဲ အယူရှိသူတှေ၊ ဘာသာတရား ကိုငျးရှိုငျးသူတှကေတော့ တိရစ်ဆာနျတှလေို အကငျြ့ရှိသူတှလေို့ ပွောဆို ခြိုးဖဲ့ကွတယျ။ လူသားဝါဒီတှေ ကတော့ သှေးနဲ့ကိုယျ သားနဲ့ကိုယျ လူသားနှဈဦးရိုးရိုးသားသား လိငျပိုငျးဆိုငျရာ နှဈဦးသဘောတူ ဆကျယှကျကွတာ ဘယျ သူ့ကိုမှ မထိခိုကျတဲ့ မိတျဆှသေူငယျခငျြးလို ဆကျဆံရေးလို့ ပွောကွတယျ။
ကြှနျတျောကတော့ ဘယျဘကျကိုမှ တအားကွီး သဘောကတြယျလို့တော့ မဟုတျပါဘူး။ ဒါပမေဲ့ လိငျအင်ျဂါခွငျး ဆကျယှကျ တကျမကျ ခငျြတာ တဈခု တညျး၊ အိပျရာထဲ ဆှဲသှငျးခွငျးတာ တဈခုတညျးနဲ့တော့ အငျမတနျ မှနျမွတျတဲ့ မတ်ေတာတရားကို ကိုယျစားပွုတဲ့ စကား “ခဈြတယျ” ဆိုတဲ့ စကားလုံး ကတိကဝတျကို အသုံးခတြာကမှ ယုတျမာတယျလို့ မွငျတယျ။ နှဈဦးသဘောတူ ကွညျကွညျဖွူဖွူ ဝုနျးကွတာ ဘယျသူမှ မထိခိုကျဘူးဆိုရငျ လုပျကောငျး တယျလို့ မွငျတာပါပဲ။ ခုတော့ ကြှနျတေျာ့ ရငျခှငျထဲ ရောကျနတေဲ့ သူငယျခငျြးကို ခဈြတယျ လို့ တဈခှနျးမှ မပွောဘဲ ငါတို့အထီးကနျြနတေုနျး တဈယောကျ ကို တဈယောကျ အဖျောလုပျကွပါစို့လို့ ရိုးရိုးသားသားပွောရငျး အားရပါးရ နူတျခမျးခွငျး နမျးနတော တဖွညျးဖွညျးနဲ့ နှယျနီလညျး အပျေါပိုငျး ဗလာကငျြး နပေါပွီ။ “ခဈြတယျ ငစညျရယျ” ဆိုပွီး သူညညျးညညျးနတောကို ကြှနျတျော ကွားသားပဲ။ မသခြောသေးပဲနဲ့ ဒီစကားကို ကြှနျတျော မသုံးခငျြဘူး။ “နငျဘာ လို့ သိပျလှတာလဲ နှယျနီရယျ” လို့ သူ့နားရှကျနားကို ကပျပွောရငျး နားထဲကို လြှာလေးထညျ့လိုကျတယျ။ သူ့ခြှေးနံ့က နညျးနညျးတော့ ညှီတယျ။ ဒါပမေဲ့ ကြှနျတျော မိနျးမတှရေဲ့ ခြှေးနံ့ကို ကွိုကျတယျဗြ။ ခုမှပဲ သိတယျ။ ကြှနျတေျာ့သူငယျခငျြး အပြိုကွီးမမ က တကယျ့ အထနျ ပဲဗြ။ နားထဲကို လြှာပဲ ထညျ့ရ သေးတယျ ညညျးသံကို စုံနတောပဲ။ မတျောတဆလိုလို နဲ့ ကြှနျတေျာ့ ပေါငျကွားက ပစ်စညျးကို မထိတထိကိုငျနတေယျ။ သူကိုငျခငျြနတောသိသားပဲ။ မိနျးကလေးကတော့ ပထမဆုံးအကွိမျမှာ ကိုယျ့ပစ်စညျးကို လာကိုငျပါ့မလား။ နူတျခမျးကို ပွနျစုပျပေးလိုကျရငျး သူ့လကျကို အသာယူလို့ ပစ်စညျးပျေါ တငျ ပေးလိုကျတယျ။ ရှတေို့းနောကျဆုတျတော့ လုပျပေးရှာပါတယျ။ သိပျတော့ ကြှမျးကငျြအဆငျ့ မဟုတျတော့ ဖီးတော့ သိပျမလာဘူး။ ဒါပမေဲ့ သူအာသာပွေ ကိုငျပါစေ ဆိုပွီး အလိုကျသငျ့ နပေေးလိုကျတယျ။ လြှာတှလေညျပငျးတှေ စုံသလောကျရှိပွီး နှဈယောကျလုံးမကျြနှာလညျး အနမျးရညျတှေ ရှဲနမှေ ကြှနျ တေျာ့ရဲ့ အကွိုကျဆုံး အပိုငျး နို့ကို ဆငျးပါပွီ။
ညိုညို ထိပျဖူးလေးကို ပါးစပျနဲ့ ငုံပွီးခဲလိုကျတယျ။ ကလေးတဈယောကျကို တပွှတျပွှတျနဲ့ စို့ပွီး လကျတဈဖကျနဲ့ ကနျြနို့တဈလုံးကို မနာ့တနာလေး ခပြေေး နလေိုကျတယျ။ နှယျနီကတော့ ငရုတျသီးမြား စပျသလို တရှီးရှီးနဲ့ပေါ့။ ခဈြတယျ လို့ ပွောလိုကျ သပေါပွီလို့ ပွောလိုကျ ကောငျးလိုကျတာလို့ ပွောလိုကျ တ အငျးအငျး နဲ့ တိုးတိုးလေး ညညျးနတေယျ။ သူအသညျးခိုကျအောငျ ကွိုကျနပွေီဆိုတာ ကြှနျတျောသိတယျ။ ဒီနရောမှာ ကြှနျတေျာ့အတှအေ့ကွုံကို ဖောကျသညျခခြငျြတယျ။ တခြို့မိနျးကလေးတှဟော နို့စို့တာကို သူတို့ပစ်စညျးကို ကစားတာထကျ ပိုကွိုကျကွတယျ။ တခြို့က နို့စို့ရငျ အေးဆေးပဲ အောကျ ပိုငျးကို ကစားမှ ခါခါပွီး ဖီးတှတေကျကွတာ။ ကိုယျ့အဖျောဘာကွိုကျလဲ အကဲခတျပေါ့ ကိုယျ့လူရာ။ နို့နှဈလုံးကို စို့လိုကျ၊ ထိပျဖူးလေးတှကေို လကျြလိုကျ လုပျနတော နှယျနီလညျး အသံပေါငျးကို စုံနတောပဲ။ လကျတဈဖကျက အောကျကို ဆငျးပွီး လုံခွညျထဲ နိူကျခလြိုကျတယျ။ အတှငျးခံဘောငျးဘီအပျေါကနေ သူ့ပစ်စညျးကို စမျးရတာပေါ့။ အမလေး ဘောငျးဘီတောငျ ရှဲနတောပဲ။ လတျစသတျတော့ ကြှနျတေျာ့ သူငယျခငျြးက ကြှနျတေျာ့လိုပဲ ငတျပွတျနတောကိုး။ ဗိုကျသားလေးကို လိုကျနမျး၊ အောကျကလညျး ဘောငျးဘီအပွငျက ပှတျပေးပွီး မကျြနှာကို တဖွညျးဖွညျး အောကျဆငျးလာခဲ့လိုကျတယျ။ သူကတော့ ပကျလကျကွီး မကျြလုံးမှိတျလို့ တရှူးရှူး တရှားရှားနဲ့။ အပျေါပိုငျးက နို့တှဲလောငျးနဲ့ ကြှနျတေျာ့သူငယျခငျြး ဖီးတကျနပေုံက တကယျ့ခဈြစရာလေးဗြာ။ မကျြမှောငျလေးကို ကြုတျနတောပဲ။
ဘောငျးဘီမခြှတျသေးပဲ သူ့ပေါငျခွံလေးကို လြှာလေးနဲ့ ကလိလိုကျတယျ။ ဘောငျးဘီကို ဆှဲခြှတျတော့ သူက မူယာမာယာနဲ့ ပွနျဆှဲနသေေးတယျ။ သူ့လကျ ကို ဖယျပွီး ဆှဲခြှတျခလြိုကျတယျ။ တကယျ့ကို တောဖွဈလို့ ထူနတောပါပဲ။ မဲမဲမှောငျမှောငျ တောအုပျကွားထဲမှာ သူ့ညီမလေးကတော့ အရညျတရှဲရှဲနဲ့ ကြှနျ တေျာ့ကို ကွိုနလေရေဲ့။ မွနျမာမိနျးကလေးပီပီ ပစ်စညျးကတော့ ညိုညဈညဈပါပဲ။ ကြှနျတျောတံတှေးကို မွိုခလြိုကျတယျ။ မှနျနတေဲ့ တဏှာစိတျကွောငျ့ သူ့ အမြိုးသမီးပစ်စညျးကို လြှာနဲ့ ကလိမယျ၊ စုပျမယျပေါ့လေ။ ခတျေစကားနဲ့ပွောရငျ ဘာဂြာပေါ့။ အနားကပျလိုကျတော့ ပုပျညှီညှီလေးဗြ။ အေးလေ မထငျမှတျ ဘဲ အိပျယာပျေါရောကျသှားတာဆိုတော့ သူလညျး ဘယျပွငျဆငျထားပါ့မလဲ။ နောကျမှ အားရပါးရ မှုတျတော့မယျ။
သူ့ဘေးကို ပွနျလှဲပွီး ကိုယျတုံးလုံးဖွဈနတေဲ့ သူ့ကို ရငျခှငျထဲ ဆှဲသှငျးပွီး ကြှနျတေျာ့ ပုဆိုးကို ခြှတျလိုကျတယျ။ ပစ်စညျးကိုလညျး သူ့လကျထဲ ထညျ့ ပေးလိုကျတော့ မလုပျတတျ လုပျတတျ နဲ့ ဂှငျးတိုကျပေးနတေယျ။ “အကွီးကွီးပဲနျော” တဲ့ ပွောပွီး ကြှနျတေျာ့ဟာကို မရဲတရဲ ခိုးကွညျ့နတေယျ။ ကြှနျတျော လညျး အလိုကျသငျ့ သူ့ပေါငျကွားထဲ ညာလကျကို ထညျ့ပွီး သူ့ပစ်စညျးကို လကျညိုးလကျခလယျနဲ့ မှတေော့တာပဲ။ အားပါးပါး။ ထနျလိုကျတဲ့ ကြှနျတေျာ့ သူငယျခငျြး။ ပစ်စညျးကို မှတောနဲ့ အလိုလို ပေါငျက ကားတကျလာတာ။ ကြှနျတေျာ့ တုတျကိုလညျး ညှဈလိုကျတာဗြာ သူ့လကျက။ ပါးစပျကလညျး ညညျး လိုကျတာစုံလို့။ မောငျရယျ ဆိုတာတောငျ ပါသေးတယျ။ တဈခကျြတဈခကျြ သူ အကွောဆှဲတယျတောငျ ထငျတယျ။ “ငါတို့ ခဈြကွတော့မယျနျော နှယျနီ” လို့ သူ့မကျြနှာကို ကွညျ့ပွီး ပွောလိုကျတယျ။
ကြှနျတေျာ့ လညျကုတျကို ဆှဲဖကျပွီး “မသိဘူးဟာ” ဆိုပွီး တဈခှနျးထဲ ပွောလို့ ကြှနျတေျာ့ကို တကျတကျမကျမကျကွညျ့နတေယျ။ ဒီလောကျဆို လုံလောကျ ပွီ။ ဘယျမိနျးကလေးကမှ အောစာအုပျထဲကလို လိုးပါတော့ ရှငျရယျ ဘာညာ မပွောဘူးဗြ။ ကြှနျတေျာ့ ဗီရိုထဲက ကှနျဒုံးအကောငျးစားလေး တဈခုကို ထယူ လိုကျတယျ။ ထလိုကျတော့ ဖငျပွောငျတာ သူငယျခငျြးမရှေ့ နဲနဲတော့ ရှကျသား။ ဒီမှာ တလကျစတညျး ခငျဗြားတို့ကို ပွောခငျြသေးတယျ။ သူမြားသားသမီး ကို မယူရသေးခငျ ကိုငျ မယျဆိုရငျ အကောငျးဆုံးက ကှနျဒုံးပဲဗြ။ သန်ဓတေားဆေးတှကေ အမြိုးသမီးတှကေို ဟိုမုနျးအပွောငျးအလဲ ဖွဈစတေယျ။ အလှ ပကျြတာတှေ၊ ကိုယအလေးခြိတျတကျတာတှဖွေဈတယျ။ အရေးပျေါ တားဆေးတှဆေို ပိုဆိုးတယျ။ မတားရငျလညျး မတျောတဆကိုယျဝနျရရငျ လူမှုရေး အရှုပျအထှေးတှေ ဖွဈလာမယျ။ ကှနျဒုံးသုံးတာ ဖီးတော့ နညျးနညျးပကျြတာပေါ့ဗြာ။ ဒါပမေဲ့ နှဈယောကျလုံးအတှကျ ကနျြးမာရေး၊ လူမှုရေး လုံခွုံတယျ။ စှပျဖို့ မပငျြးကွနဲ့ ကိုယျ့ဆရာမြား။
မာဂလောငျနတေဲ့ ကြှနျတေျာ့ဟာကို လှယျလငျ့တကူပဲ စှပျလိုကျတယျ။ ကိုယျ့ကောငျကလညျး ဘယျလောကျတောငျ ထနျနတေယျမသိ ခါရမျးနတောပဲ။ သူ့ ပစ်စညျးဝလေးကို ထပွီး တလေို့ကျတယျ။ “အားးးး…ရှီး…နာတယျ နာတယျ” ဖွညျးဖွညျးခငျြး အဝလေးပဲ ခြော့ထညျ့လိုကျတယျ။ အစပိုငျးတော့ ဖွညျးဖွညျးခငျြးပဲ ပျေါကနေ ညှောငျ့ရငျး ခြော့ထညျ့ရတာပေါ့။ သူကတော့ ကြှနျတေျာ့အိပျရာခငျးကို အားကုတျဆှဲကုပျပွီး ကိုငျထားတယျ။ စီးပိုငျပွီး ဖွညျးဖွညျးခငျြးဝငျသှားတဲ့ ကြှနျတေျာ့ပစ်စညျးကို သူ့ဟာလေးက အထဲကနေ ညှဈနတေယျ။ ကောငျးလိုကျတာမြားဗြာ စာနဲ့တောငျ မရေးပွတကျဘူး။ “ငါ့ ကို ဖကျထားပါနှယျနီ” သူကြှနျတေျာ့ခါးကို ဆှဲဖကျတယျ။ မကျြနှာကို အောကျငုံလိုကျရငျး သူ့ပါးလေးကို နမျးလိုကျ အောကျက လုပျလိုကျနဲ့ တကယျ့ ကာမ စညျးစိမျ ပါပဲ။ နို့လေးကိုလညျး မထိတထိ လှမျးလှမျးဟပျတယျ။ ၃ မိနဈလောကျ ဆောငျ့ပွီးတဲ့အခါ သူအောကျနေ ပွနျတုနျ့ပွနျနတေယျ။ အပျေါကဆောငျ့ ၊ အောကျကဆောငျ့ပေါ့လေ။ နှယျနီပွီးတော့မယျထငျတယျ။ သူ့အသကျရှူသံတှေ ပွငျးလာပွီး၊ ညညျးသံတှလေညျး တဖွညျးဖွညျး ကယျြလာတယျ။
“ငစညျ မွနျမွနျလုပျပေးပါ ခဈြရယျ” “နငျပွီးတော့မှာလား” “မသိဘူးဟာ” ကြှနျတျောလညျး အားရပါးရ ဆကျတိုကျဆောငျ့ပေးတယျ။ ကိုယျပွီးသှားမှာ လညျး ကွောကျလို့ ထိနျးရသေးတယျ။ ကားထားပေးတဲ့ နှယျနီ့ခွထေောကျဟာရုတျတရကျ ထောငျတကျလာပွီး ကြှနျတေျာ့ခါးကို ခှပွီး ဖကျလိုကျတယျ။ အထဲက သူ့သားအိပျဝကလညျး လှုပျလိုကျတာ ကြှနျတေျာ့ဟာကို မွှမွေိုနသေလိုပဲ။ ကြှနျတေျာ့ပါးကို အလုအယကျနမျးနပွေီး တုနျတကျလာတဲ့ သူ့အသား တှကေို ကွညျ့ပွီး သူပွီးသှားမှနျး ကြှနျတျောသိလိုကျပါပွီ။ ကြှနျတျောလညျး စိတျကို လှတျပေးလိုကျတယျ။ နောကျအခကျြ ၂၀ လောကျ ဆောငျ့လိုကျရော ကြှနျတျောလညျး ပွီးထှကျသှားတယျ။ ဘာနဲ့မှမတူတဲ့ အရသာ။ ကြှနျတေျာ့ ခုတငျဆို တဝုနျးဝုနျးနဲ့ဗြ။ သူ့အပျေါမှာပဲ ခဏ စိမျနသေေးတယျ။ အကွာကွီး တော့ နလေို့မဖွဈ။ ကှနျဒုံးကို ထခြှတျရသေးတာကိုး။ ပွီးတော့ ကိုယျတုံးလုံးနဲ့ပဲ သူ့ဘေးနားလှဲပွီး နှယျနီ့ကို ရငျခှငျထဲ ဆှဲသှငျးထားတယျ။
“နငျကောငျးရဲ့လား နှယျနီ” မသိဘူးဟာ ဆိုတဲ့ တဈခှနျးထဲ ပွောပွီး ကြှနျတေျာ့ရငျခှငျထဲမကျြနှာကို ဝှကျထားတယျ။ သူ့နဖူးကို ငုံနမျးပွီး ခြှဲတှရှေဲနတေဲ့ ဆံနှယျ လေးတှကေို သုတျပေးလိုကျတယျ။ ပွောမနာဆိုမနာ မောငျနှမလို သူငယျခငျြးနျှဈယောကျ ခုတော့ အိပျရာပျေါမှာ ဝတျလဈစလဈနဲ့။ ရငျခုနျတာ ခုထိကို မရပျ သေးဘူး။ သူကတော့ ရငျခှငျထဲမှာ ကြှနျတေျာ့ရငျဘတျကို ခိုးနမျးနတေယျ။ ပွီးပါပွီ။
ငါ သိပ် အထီးကျန်တယ် သူငယ်ချင်း။ ဒါကြောင့်နင့်ကို ငါ ကိုယ်ချင်းစာတယ်” လို့ ကျွန်တော် ပြောလိုက်တော့ နွယ်နီက ကျွန်တော့်ကို အကြောင်သား ကြည့် နေတယ်။ “နင်က အထီးကျန်ရအောင် ရည်းစားကြီး ငုတ်တုတ်နဲ့လေ။ ငါက အသည်းကွဲနေတာဟဲ့” “ငါ့ရည်းစားက နိုင်ငံခြားမှာလေ။ ကြာပြီဟ။ ငါက ရည်းစားရှိတယ်လို့ နာမည်ပဲရှိတာ။ ငါပြောတာ နင်သဘောပေါက်ပါတယ် နွယ်နီရာ”
ကျွန်တော်နဲ့ နွယ်နီက ငယ်ငယ်ကတည်းက မောင်နှမလို နေခဲ့တဲ့ သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ပါ။ ကျွန်တော်က ငယ်ငယ်ကတည်းက ရည်းစားရှုပ်တယ်ဆိုပေမဲ့ နွယ်နီ့ကိုတော့ မောင်နှမလိုသာ ဆက်ဆံတယ်။ ယောင်္ကျားလေး သူငယ်ချင်းတွေလိုပဲ ချစ်တယ်။ ဟိုကောင်တွေနဲ့ ဘောလုံးသွားမကန်ဖြစ်တဲ့ နေ့ဆို နွယ်နီ့ အိမ်သွား၊ သူကျွေးတဲ့မုန့်စား၊ ခွေကြည့်နေကျ။ နွယ်နီက ကျွန်တော့်ကို ကြိုက်နေတယ်လို့ ဘော်ဒါတွေက နောက်ကျရင်တောင် ကျွန်တော်က ဘုကြည့် ကြည့်တာ။ ကျွန်တော် တခြားမိန်းကလေးတွေနဲ့ ရှုပ်ပေမဲ့ သူ့ကိုတော့ ကျွန်တော့်ရဲ့ အများကြီးတွေထဲက တစ်ယောက် အဖြစ်မခံပါ။ သူ့အပေါ်ထားတဲ့ ကျွန် တော့် အချစ်က ဒီလို။ သူ့အမေနဲ့လည်း ကျွန်တော်က ခင်တယ်။ ခုတော့ ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်က ကလေးတွေမဟုတ်ကြတော့။ နှစ်ယောက်လုံး အသက် ၃၀ နီးပါး။ ကျွန်တော်က အိုင်တီ ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာ ဆော့ဖ်ဝဲအင်ဂျင်နီယာ။ နွယ်နီက နာမည်ကျော် ဟိုတယ်တစ်ခုမှာ ကောင်တာထိုင်သူ။ receptionist ပေါ့။
ငယ်ငယ်ကလောက် မတွဲဖြစ်တော့။ တခါတလေ အွန်လိုင်းက စကားပြောဖြစ်တယ်။ ကလေးတွေလည်း မဟုတ်ကြတော့ သူ့အိမ် ဝင်ချင်တိုင်း ဝင်နေတာ လည်း မသင့်တော်တော့။ ပြီးတော့ ကျွန်တော်ကလည်း ဇာတိမြို့ငယ်လေးက ပြောင်းသွားပြီလေ။ သူနဲ့ ကျွန်တော်နဲ့ကြား နောက်ထပ် အလှမ်းကွာရတဲ့ အကြောင်းရင်း နောက်တစ်ခုက သူ့ရည်းစားပါ။ ဒီကောင်က တော်တော်ဂျေကြီးတယ်။ နွယ်နီပဲ မိတ်ဆက်ပေးလို့ သိတာပါ။ ကျွန်တော်ကတော့ ကိုယ့် သူငယ်ချင်းရဲ့ဘဲ ဆိုပြီး ခင်ခင်မင်မင် နေပါတယ်။ ကျွန်တော်နဲ့ ဖက်လဲတကင်းနေတာ ကြိုက်ပုံမပေါ်။ ဒီကောင် စိတ်မချလည်း မချချင်စရာ။ နွယ်နီက ငယ် ငယ်ကတည်းက မိုက်တာ။ ခုလို အသက်သုံးဆယ် ဆိုတော့ တင်တွေ ရင်တွေက တော်တော်လှတယ်။ မျက်စိထဲမြင်အောင် ပြောရရင် ဗမာကြိုက် ခပ် တစ်တစ် ငါးရံ့ကိုယ်လုံးမျိုး။ ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်းမ မျက်နှာကတော့ သိပ်အလှကြီးမဟုတ်ပါ။ ဒါပေမဲ့ ရုပ်ဆိုးတဲ့အထဲလည်း မပါဘူး။
တစ်ရက်နွယ်နီ ဖုန်းဆက်တယ်။ ဖုန်းကို ကျွန်တော် စပြီး ဖြေကတည်းက ငိုတော့တာပဲ။ နာရီဝက်လောက်ကြာမလားပဲ ကျွန်တော့်အထင် ။ ကျွန်တော်က “ဟဲ့ သူငယ်ချင်း ဘာဖြစ်တာလည်း ငါ့ကို ပြောစမ်း။ နင့်အမေ နေမကောင်းဘူးလား ” ဘာညာ မေးတာပေါ့။ နွယ်နီမ က ဟင့်အင်း လို့ပြောပြီး ငိုပဲ ငိုနေ တယ်။ ပြီးတော့မှ “ငါ့ကို သူထားသွားပြီဟယ်” လို့ တစ်ခွန်းပြောတယ်။ သနားပါတယ်။ သူငယ်ချင်း အပျိုကြီးမမတော့ ရည်းစားဦးမှာ ခံရရှာပြီ။ ကျွန်တော် ကတော့ သူပေါ့ပေါ့ ပါးပါးဖြစ်အောင် ပြန်ပြောပေးပါတယ်။ “အမယ်လေးဟယ် ရည်းစားနဲ့ ပြတ်တာများ။ ငါဆို ခဏခဏ ရည်းစားထား၊ ခဏခဏ ပြတ် နဲ့ အသဲကွဲတာ ရိုးနေပြီ အေးဆေးပေါ့ နွယ်နီရာ” “မတူဘူးဟဲ့။ ငါကမိန်းကလေး” “မိန်းကလေးတွေ ဘာတွေ လုပ်မနေနဲ့။ ဒီတစ်ပတ် ရုံးပိတ်ရက် ငါ့ဆီလာခဲ့။ ငါတို့ သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက် ငါ့အခန်းမှာ ဟော့ပေါ့ လုပ်စားကြမယ်။ နင်စိတ်ပြေလက်ပျောက်ပေါ့”
တကယ်ဆို နွယ်နီ့ကို ကျွန်တော် မခေါ်ခဲ့သင့်ပါဘူး။ ဒီလိုသာ မခေါ်ခဲ့ဘူးဆိုရင် နွယ်နီလည်း ကျွန်တော့်ရဲ့ တိတ်တိတ်ပုန်း ရည်းစား အဖြစ် မျက်နှာငယ်ရမှာ မဟုတ်သလို၊ ကျွန်တော်လည်း ကျွန်တော့် ချစ်သူကို သစ္စာဖောက်ဖြစ်မှာ မဟုတ်ဘူး။ သူဟိုတယ်မှာ နားရက်ရတော့ ကျောက်မြောင်းက ကျွန်တော့် တိုက်ခန်းကို ဟင်းချက်စရာတွေနဲ့ ရောက်လာတယ်။ သူတံခါးခေါက်တော့ ကျွန်တော် အိပ်ရာထဲမှာ ကွေးကောင်းတုန်း။ နွယ်နီ့ကို ကျွန်တော် အခန်းတံခါး ထဖွင့်ပေးလိုက်ပြီး အိပ်ယာထဲ ပြန်ဝင်ခွေနေလိုက်တယ်။ နွယ်နီက ဝယ်လာတဲ့ ဟင်းချက်စရာတွေကို ကျွန်တော့်ရေခဲသေတ္တာလေးထဲ သွားထည့်နေတယ်။ နောက်ဖေးမှာ ကတောက်၊ ကတောက်နဲ့ ဘာတွေလုပ်နေမှန်းမသိ။ ကျွန်တော်ကတော့ အိပ်ရာထဲ ဆက်ကွေးနေလိုက်တယ်။
“နင့်ကို ငါမနက်ကတည်းက ဖုန်းဆက်ထားတယ်။ ခုထိ အိပ်ရာထားမှာပဲလား ငစည် ရဲ့။ ထတော့ဟာ” ။ နွယ်နီက ပြောပြောဆို ဆိုနဲ့ အခန်းဝမှာ ရပ်နေ တယ်။ မနက်ခင်းနေရောင် ဖြာကျနေချိန်မှာ သူ့ကိုယ်လုံးအလှကလည်း ထင်းနေတာပဲ။ ငါးရံ့ကိုယ်လုံး တစ်တစ်လေးကို မြန်မာဝတ်စုံဝတ်ထားတော့ ကိုယ် လုံး အလှကပေါ် တာပေါ့။ ရည်းစားနဲ့ ပြတ်ထားတဲ့ သူငယ်ချင်းမ တောင့်တောင့်ဖြောင့်ဖြောင့်ကြီးရဲ့ ကိုယ်လုံးကို ခံစားနေရင်း နိုင်ငံခြား ရောက်နေတဲ့ ကိုယ့် ရည်းစားကိုယ်တောင် သစ္စာဖောက်ချင်ချင်ဖြစ်လာတယ်။ “ဟဲ့ မထ သေးဘူးလား။ ငါလာစောင်ဆွဲလှန်ရမလား” “မလုပ်နဲ့ မလုပ်နဲ့ ထပြီထပြီ” နွယ်နီက ပြောလို့ရတာမဟုတ်။ ငယ်ငယ်တုန်းကလိုဆိုပြီး စောင်ဆို ဇက်ကနဲ လာဆွဲလှန်မှဟုတ်ပေ့ဖြစ်မယ်။ သူ့ကိုယ်လုံးနဲ့ တင်သား၊ ရင်သား ကောက်ကြောင်းတွေ ကို ကြည့်ပြီး ကျွန်တော့် ပစ္စည်းက ဒိန်းမတ် ဖြစ်နေတာ။ ကမူးရှူးထိုးထပြီး သူ့ဘေးကနေ အခန်းအပြင်ကို မျက်နှာသစ် ရေမိုးချိုးဖို့ ထွက်လိုက်တယ်။ သူ့ နားက အဖြတ်မှာ တစ်သက်လုံး သူ့အပေါ် သန့်ရှင်းလာတဲ့ ကျွန်တော့်လက် စပြီးတော့ ကစားတော့တာပဲ။ “အိပ်ကောင်းခြင်း မအိပ်ရဘူး။ အသားမဲမ” ဆို ပြီး ပါးကို လိမ်ဆွဲလိုက်တာ။ စိတ်ထဲမှာ ဘယ်လိုကြီး ဖြစ်သွားလဲမသိ။ ရေမွေးနံ့နဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ ချွေးနံ့၊ ကိုယ်သင်းနံ့ ရောနေတဲ့ ရနံ့က ကျွန်တော့်ကို ဖျားယောင်းတာ ဖြစ်မယ်။ သူကတော့ သတိတောင် ထားမိရဲ့လား မသိဘူး။
“ခွေးကောင်ငစည်ရေ လူအသားဟဲ့ နာတယ်။ ဒါနဲ့ နင့် တီရှပ်အဟောင်း တစ်ထည် ငါ့ကို ပေးစမ်းပါ။ ငါ့အင်္ကျီ ပူတယ်။ နင်ရေချိုးနေတုန်း ငါလဲထားမလို့” “ငါ့ ဗီရိုထဲမှာ ရှာလိုက်” ကျွန်တော်ရေချိုးခန်းထဲရောက်မှ သက်ပြင်းချနိုင်တယ်။ ကိုဖိုးထောင် ဖြစ်နေတဲ့ ကျွန်တော့် ပစ္စည်းကို နွယ်နီမ မမြင်အောင် အတင်း ပေါင်ကြားညှပ်ပြီး လိန်ကျစ်ကျစ်နဲ့ ထွက်လာရတာကိုး။ ကျွန်တော်က ငရှုပ်လို့သာ ပြောတာပါ။ အလုပ်တွေကများ၊ ခရီးက ဆက်တိုက်ထွက်ရ။ အ ရင်က ချိန်းချိန်း ချစ်နေကြ ရည်းစားကလည်း နိုင်ငံခြားသွားနေတာ ၂ နှစ်ရှိပြီ။ ပြောရရင် လိင်ရမက်အာသာအပြည့် အသက် ၃၀ တန်း ယောင်္ကျားတစ် ယောက်ပါ။ အရင်က ဒီလောက်ထန်နေရင် လက်နဲ့ ဂွင်းတိုက်ရင်း စိတ်ဖြေလိုက်တာပဲ။ ခုလည်း ရေချိုးခန်းထဲမှာ လုပ်မလို့ ကျောက်ခဲလို မာနေတဲ့ ညီလေး ကို ကိုင်လိုက်သေးတယ်။ ဘာလို့မှန်းတော့ မသိဘူး တစ်ခုခု လုပ်ရတော့မယ်လို့ စိတ်ထဲထင်နေတာမို့ မလုပ်လိုက်တော့ဘူး။ ရေကိုပဲ တဝုန်းဝုန်းချိုးလိုက် တော့တယ်။ ကြည်လင်လန်းဆန်းသွားတာပဲ။
ကျွန်တော် အဝတ်အစားလဲပြီးတော့ နွယ်နီ့ကို အော်ခေါ်လိုက်တယ်။ ငါဝရန်တာမှာ ငစည်ရေလို့ ဖြန်ထူးတယ်။ ကျွန်တော့်တီရှပ်ပွပွကြီးထဲမှာ ချစ်စရာ ကောင်းနေတဲ့ နွယ်နီမ က ဝရန်တာမှာ။ ပိတ်ရက် လမ်းပေါ်မှာ ဘောလုံးကန်နေတဲ့ ကလေးတွေကို ငေးနေတယ်။ ကျွန်တော်ဝရန်တာကို လိုက်သွားလိုက် တယ်။ “ဟဲ့ ငါနင့်ဖို့ မုန့်ဟင်းခါး ဝယ်လာတယ်။ အုပ်ဆောင်းထဲမှာ သွားစားလိုက်” “ဘာလို့လည်းမသိဘူး မစားချင်ဘူးဟာ” ဘယ်စားချင်ပါ့မလဲ။ ကျွန် တော့်အာရုံက ရမက်ဆန္ဒတွေနဲ့ သွေးတိုးနေတာကိုး။ ဝရန်တာသံပန်းဘက်ကို လှည့်ပြီး ကျောပေးထားတဲ့ နွယ်နီ့ကို ကျွန်တော် နောက်ကနေ ခါးကို ဖက် ထားလိုက်တယ်။ “ငါတို့နှစ်ယောက်လုံး အထီးကျန်တာ နင်သိပါတယ်နွယ်နီရာ၊ ငါ့ကို အဖော်လာလုပ်ပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်” ကျွန်တော်ဘာတွေ ပြောမိမှန်းမသိ။ စိတ်ထဲရှိရာ ပြောပြီး၊ ဖြစ်ချင်ရာဖြစ် ဆိုပြီး ဖက်ချလိုက်တာ။ ဒါပေမဲ့ သူမရုန်းပါဘူး။ “နင်သူ့ကို သစ္စာရှိရမယ်လေ။ ငစည်ရဲ့” တဲ့ ဒါပဲပြော တယ်။ ပြီးတော့ ဖက်ထားတဲ့ ကျွန်တော့်လက်ကို အပေါ်ကနေ အုပ်ကိုင်ထားတယ်။ သူ့ရေမွေးနဲ့ ချွေးနံ့ပေါင်းထားတဲ့ ကိုယ်သင်းနံ့က ကျွန်တော့်အတွက် ရူးမ တက်ပဲ။ အောက်က ပစ္စည်းကလဲ အရေးထဲ ထိန်းကနဲ ထောင်တက်လာလို့ နောက်ကို ဆုတ်ထားရသေးတယ်။ ဖက်သာဖက်ထားရတယ် ကုန်းကွကွကြီး။ သူ့ လက်ကို ဆွဲပြီး အခန်းထဲ ပြန်ဆွဲခေါ်လာလိုက်တယ်။
မျက်နှာခြင်းဆိုင် ပုံစံနဲ့ ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက် တိတ်တဆိတ်ကြီးကို ရပ်နေကြတယ်။ ဘာမှ မပြောဖြစ်။ ကျွန်တော့်နှာခေါင်းဝက သူ့ နဖူးထားမှာ။ ဖြစ်ချင် ရာဖြစ်ဆိုပြီး နောက်တစ်ဆင့် လွုပ်ရှားတယ်။ နဖူးလေးကို နမ်းလိုက်တာ။ ခက်ကတော့ ခါးကို ဖက်ထားလိုက်တာပေါ့။ မေးစေ့ကနေ သူ့ခေါင်းကို မော့ပြီး နူ တ်ခမ်းကို အသာနမ်းလိုက်တယ်။ သူခေါင်းယမ်းပြီးရှောင်လိုက်တော့ လည်ပင်းကို သွားထိတယ်။ “သူငယ်ချင်းရယ် နင့်ကို ငါ ငယ်ငယ်ကတည်းက ချစ်နေ တာ လူတိုင်းသိပါတယ်။ ငါ့ကို မမြူဆွယ်ပါနဲ့တော့။ နင့်မှာလည်း လက်ထပ်မယ့် မိန်းကလေးနဲ့ပါ မစည်ရယ်။ ငါ့ကို မချစ်နိုင်လည်း တန်ဘိုးလေးထားပါ ဟာ” လို့ ပြောတယ်။ ကျွန်တော့်ရင်ခွင်ထဲ ခေါင်းလေး ဝင်ပြီး တသိမ့်သိမ့်နဲ့ ငိုနေတယ်။ ကျွန်တော့်နေရာမှာ ခင်ဗျားတို့ဆို ဘာလုပ်မလဲ။ လူကလည်း ထန် နေပြီ။ ရင်ခွင်ထဲက တစ်သက်လုံး မောင်နှမလို နေလာတဲ့ သူငယ်ချင်းက သူ့ကို မမြူဆွယ်ပါနဲ့လို့ တောင်းပန်နေတယ်။ ပြီးတော့ ပြောသေးတယ်။ ကျွန် တော့်ကို ချစ်သတဲ့။ ကျောကိုလည်း သိုင်းပြီး ဖက်ထားသေး။ ကျွန်တော့် တဏှာက ကျွန်တော့် ဆင်ခြင်တုံတရားကို နိုင်သွားပြီဆိုတာ သိတော့ ကျွန်တော် နောက်ကျသွားပါပြီ။
“ကျေးဇူးပြုပြီး ဘာမှ မပြောပါနဲ့တော့ သူငယ်ချင်းရယ်” လို့ တုန်တုန်ယီယီ အသံကြီးနဲ့ ပြောလိုက်ပြီး သူ့မေးဖျားကို ဆက်ကနဲ ဆွဲမော့လိုက်တယ်။ အောက် က ညီလေးကလည်း မာဂလောင်နေပြီ။ သူ့ဆီးစပ်ကို သွားထောက်နေတာ။ နွယ်နီမ က ရီဝေဝေနဲ့ မော့ကြည့်တယ်။ အိထွေးနေတဲ့ သူ့နူတ်ခမ်းကို အာသာ ပြင်းပြင်းနဲ့ ကျွန်တော်စုပ်ချလိုက်တယ်။ ကျွန်တော်သိပ်တက်မက်ခဲ့ရတဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ ကိုယ်သင်းနံ့။ အရာအားလုံးဟာ အရောင်တွေ တောက်လာ သလို။ ဘေးဘီကို ဘာမှမသိတော့ဘူး။ ကျွန်တော့်မျက်လုံးတွေ မှိတ်ထားတာတောင်မှ အရောင်တွေ တဖြက်ဖြတ်လင်းနေတယ်။ သူ့အပေါ်နူတ်ခမ်းလေးကို ဖြည်းဖြည်းလေး မျှဉ်းစုပ်နေတုန်း၊ နွယ်နီ က ကျွန်တော့် အောက်နူတ်ခမ်းကို ပြတ်မတက်ကို ပြန်စုပ်နေတယ်။ အေးပေါ့။ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းလည်း ရည်းစားတစ်ယောက် ပြတ်ပြီးပြီဆိုတော့ နူတ်ခမ်းချင်းနမ်းတာလောက်တော့ ကျွမ်းကျင်ရောပေါ့။ သူ့ပါးစပ်ထဲ ကျွန်တော့်လျှာကို မထိတထိ ထည့် ပေးလိုက်တယ်။ သူ့သွားလေးတွေကြားထဲ ဝင်ပြီး သူ့လျှာကို သွားထိလိုက်တာ။ ခဏနေတော့ သူ့လျှာကျွန်တော့် ပါးစပ်ထဲ ပြန်ရောက်လာတယ်။ ပိုင် လောက်ပြီဆိုမှ သူ့လျှာလေးကို စုပ်ထည့်လိုက်တာ။ နွယ်နီဟာ အသားတွေကို တုန်လို့။ ခင်ဗျား ရည်းစားကိုဖြစ်ဖြစ်၊ ချစ်သူကို ဖြစ်ဖြစ် လျှာခြင်းစုပ်တာ စမ်းကြည့်သင့်တယ် ကိုယ့်လူ။ ကျွန်တော်တို့ သူငယ်ချင်း နှစ်ယောက်ရဲ့ နှာဘူးအနမ်းကတော့ နာရီဝက်လောက်ကို ကြာမယ်။ သူ့နားရွက်ကို လျှာနဲ့ ကလိ တော့ “ယားတယ် စည်သူရယ်” လို့ ညည်းသံလေးနဲ့ ကန့်ကွက်နေတယ်။ ခက်တာက မရုန်းတာပဲ။ မရုန်းရင် ကျွန်တော်ကတော့ ဆက်လုပ်ပြီးသားပဲ။
လည်ပင်းကို လျှာလေးနဲ့ ရက်ပေးလိုက်တယ်။ ကျွန်တော့် ဆံပင် ကို ကိုင်၊ အသာလေးဖွပေးပြီး “ချစ်တယ်။ သူငယ်ချင်းရယ်” လို့ နွယ်နီညည်းနေတယ်။ ကဲ မရတော့ဘူး ဟေ့။ သူဝတ်ထားတဲ့ ကျွန်တော့်တီရှပ် ပွပွကြီးကို လှန်ပြီး ချွတ်ပေးလိုက်တယ်။ မနက်က အဝတ်လဲထားတော့ ဘရာ ကိုပါ ချွတ်ထားတယ် ထင်တယ်။ ဘုရားသခင်…. သိပ်လှတဲ့ ရင်သားပါလား။ ကြီးတာလည်း မဟုတ်၊ သေးတာလည်းမဟုတ်။ ဆူဖြိုးနေတဲ့ ရင်သား။ ကျွန်တော်နမ်းဖို့တောင် မေ့ နေအောင် ရင်တွေ တဒိုင်းဒိုင်းခုန်နေတယ်။ နို့သီးခေါင်းတွေဟာ ပန်းရောင်တော့ မသန်းတော့ဘူး။ အေးပေါ့လေ သူ့ဘဲက စို့မှာပေါ့။ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်း ကို ပစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့ ငတိကို “စောက်သုံးမကျတဲ့ကောင်” ဆိုပြီး စိတ်ထဲက ကျိန်ဆဲလိုက်တယ်။ “ဘာတွေ လုပ်နေတာလည်း စည်သူရယ်” ဆိုပြီး ကျွန် တော့်လက်ဖျားတွေကို သူညှစ်တယ်။ ထုံးစံအတိုင်း မရုန်းပါဘူး။
လိင်ကိစ္စကို လူသား၏ အခြေခံလိုအပ်ချက်တစ်ခုအဖြစ်သာ သဘောထားသော အနောက်နိုင်ငံအချို့မှာ friends with benefit လို့ ပြောကြတဲ့ လိင်ပိုင်း ဆိုင်ရာ ဆက်ဆံရေးတမျိုးရှိတယ်။ မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်း လို ခင်ခင်မင်မင် ချစ်ချစ်ခင်ခင် နေကြတယ်။ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် အပြန်အလှန်ကူညီ ကြတယ်။ ကြုံရင် ကြုံသလို တူတူအိပ်ကြတယ်။ ခေတ်စကားနဲ့ ပြောရရင်တော့ ထန်ရင် ထန်သလို အကြောင်းညီညွတ်ရင် ဘောင်းဘီချွတ်ကြတယ်ပေါ့ လေ။ ဒီလို လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဆက်ဆံရေးကို ရှေးရိုးစွဲ အယူရှိသူတွေ၊ ဘာသာတရား ကိုင်းရှိုင်းသူတွေကတော့ တိရစ္ဆာန်တွေလို အကျင့်ရှိသူတွေလို့ ပြောဆို ချိုးဖဲ့ကြတယ်။ လူသားဝါဒီတွေ ကတော့ သွေးနဲ့ကိုယ် သားနဲ့ကိုယ် လူသားနှစ်ဦးရိုးရိုးသားသား လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှစ်ဦးသဘောတူ ဆက်ယှက်ကြတာ ဘယ် သူ့ကိုမှ မထိခိုက်တဲ့ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းလို ဆက်ဆံရေးလို့ ပြောကြတယ်။
ကျွန်တော်ကတော့ ဘယ်ဘက်ကိုမှ တအားကြီး သဘောကျတယ်လို့တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ လိင်အင်္ဂါခြင်း ဆက်ယှက် တက်မက် ချင်တာ တစ်ခု တည်း၊ အိပ်ရာထဲ ဆွဲသွင်းခြင်းတာ တစ်ခုတည်းနဲ့တော့ အင်မတန် မွန်မြတ်တဲ့ မေတ္တာတရားကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ စကား “ချစ်တယ်” ဆိုတဲ့ စကားလုံး ကတိကဝတ်ကို အသုံးချတာကမှ ယုတ်မာတယ်လို့ မြင်တယ်။ နှစ်ဦးသဘောတူ ကြည်ကြည်ဖြူဖြူ ဝုန်းကြတာ ဘယ်သူမှ မထိခိုက်ဘူးဆိုရင် လုပ်ကောင်း တယ်လို့ မြင်တာပါပဲ။ ခုတော့ ကျွန်တော့် ရင်ခွင်ထဲ ရောက်နေတဲ့ သူငယ်ချင်းကို ချစ်တယ် လို့ တစ်ခွန်းမှ မပြောဘဲ ငါတို့အထီးကျန်နေတုန်း တစ်ယောက် ကို တစ်ယောက် အဖော်လုပ်ကြပါစို့လို့ ရိုးရိုးသားသားပြောရင်း အားရပါးရ နူတ်ခမ်းခြင်း နမ်းနေတာ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ နွယ်နီလည်း အပေါ်ပိုင်း ဗလာကျင်း နေပါပြီ။ “ချစ်တယ် ငစည်ရယ်” ဆိုပြီး သူညည်းညည်းနေတာကို ကျွန်တော် ကြားသားပဲ။ မသေချာသေးပဲနဲ့ ဒီစကားကို ကျွန်တော် မသုံးချင်ဘူး။ “နင်ဘာ လို့ သိပ်လှတာလဲ နွယ်နီရယ်” လို့ သူ့နားရွက်နားကို ကပ်ပြောရင်း နားထဲကို လျှာလေးထည့်လိုက်တယ်။ သူ့ချွေးနံ့က နည်းနည်းတော့ ညှီတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော် မိန်းမတွေရဲ့ ချွေးနံ့ကို ကြိုက်တယ်ဗျ။ ခုမှပဲ သိတယ်။ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်း အပျိုကြီးမမ က တကယ့် အထန် ပဲဗျ။ နားထဲကို လျှာပဲ ထည့်ရ သေးတယ် ညည်းသံကို စုံနေတာပဲ။ မတော်တဆလိုလို နဲ့ ကျွန်တော့် ပေါင်ကြားက ပစ္စည်းကို မထိတထိကိုင်နေတယ်။ သူကိုင်ချင်နေတာသိသားပဲ။ မိန်းကလေးကတော့ ပထမဆုံးအကြိမ်မှာ ကိုယ့်ပစ္စည်းကို လာကိုင်ပါ့မလား။ နူတ်ခမ်းကို ပြန်စုပ်ပေးလိုက်ရင်း သူ့လက်ကို အသာယူလို့ ပစ္စည်းပေါ် တင် ပေးလိုက်တယ်။ ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ်တော့ လုပ်ပေးရှာပါတယ်။ သိပ်တော့ ကျွမ်းကျင်အဆင့် မဟုတ်တော့ ဖီးတော့ သိပ်မလာဘူး။ ဒါပေမဲ့ သူအာသာပြေ ကိုင်ပါစေ ဆိုပြီး အလိုက်သင့် နေပေးလိုက်တယ်။ လျှာတွေလည်ပင်းတွေ စုံသလောက်ရှိပြီး နှစ်ယောက်လုံးမျက်နှာလည်း အနမ်းရည်တွေ ရွဲနေမှ ကျွန် တော့်ရဲ့ အကြိုက်ဆုံး အပိုင်း နို့ကို ဆင်းပါပြီ။
ညိုညို ထိပ်ဖူးလေးကို ပါးစပ်နဲ့ ငုံပြီးခဲလိုက်တယ်။ ကလေးတစ်ယောက်ကို တပြွတ်ပြွတ်နဲ့ စို့ပြီး လက်တစ်ဖက်နဲ့ ကျန်နို့တစ်လုံးကို မနာ့တနာလေး ချေပေး နေလိုက်တယ်။ နွယ်နီကတော့ ငရုတ်သီးများ စပ်သလို တရှီးရှီးနဲ့ပေါ့။ ချစ်တယ် လို့ ပြောလိုက် သေပါပြီလို့ ပြောလိုက် ကောင်းလိုက်တာလို့ ပြောလိုက် တ အင်းအင်း နဲ့ တိုးတိုးလေး ညည်းနေတယ်။ သူအသည်းခိုက်အောင် ကြိုက်နေပြီဆိုတာ ကျွန်တော်သိတယ်။ ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော့်အတွေ့အကြုံကို ဖောက်သည်ချချင်တယ်။ တချို့မိန်းကလေးတွေဟာ နို့စို့တာကို သူတို့ပစ္စည်းကို ကစားတာထက် ပိုကြိုက်ကြတယ်။ တချို့က နို့စို့ရင် အေးဆေးပဲ အောက် ပိုင်းကို ကစားမှ ခါခါပြီး ဖီးတွေတက်ကြတာ။ ကိုယ့်အဖော်ဘာကြိုက်လဲ အကဲခတ်ပေါ့ ကိုယ့်လူရာ။ နို့နှစ်လုံးကို စို့လိုက်၊ ထိပ်ဖူးလေးတွေကို လျက်လိုက် လုပ်နေတာ နွယ်နီလည်း အသံပေါင်းကို စုံနေတာပဲ။ လက်တစ်ဖက်က အောက်ကို ဆင်းပြီး လုံခြည်ထဲ နိူက်ချလိုက်တယ်။ အတွင်းခံဘောင်းဘီအပေါ်ကနေ သူ့ပစ္စည်းကို စမ်းရတာပေါ့။ အမလေး ဘောင်းဘီတောင် ရွဲနေတာပဲ။ လတ်စသတ်တော့ ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်းက ကျွန်တော့်လိုပဲ ငတ်ပြတ်နေတာကိုး။ ဗိုက်သားလေးကို လိုက်နမ်း၊ အောက်ကလည်း ဘောင်းဘီအပြင်က ပွတ်ပေးပြီး မျက်နှာကို တဖြည်းဖြည်း အောက်ဆင်းလာခဲ့လိုက်တယ်။ သူကတော့ ပက်လက်ကြီး မျက်လုံးမှိတ်လို့ တရှူးရှူး တရှားရှားနဲ့။ အပေါ်ပိုင်းက နို့တွဲလောင်းနဲ့ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်း ဖီးတက်နေပုံက တကယ့်ချစ်စရာလေးဗျာ။ မျက်မှောင်လေးကို ကျုတ်နေတာပဲ။
ဘောင်းဘီမချွတ်သေးပဲ သူ့ပေါင်ခြံလေးကို လျှာလေးနဲ့ ကလိလိုက်တယ်။ ဘောင်းဘီကို ဆွဲချွတ်တော့ သူက မူယာမာယာနဲ့ ပြန်ဆွဲနေသေးတယ်။ သူ့လက် ကို ဖယ်ပြီး ဆွဲချွတ်ချလိုက်တယ်။ တကယ့်ကို တောဖြစ်လို့ ထူနေတာပါပဲ။ မဲမဲမှောင်မှောင် တောအုပ်ကြားထဲမှာ သူ့ညီမလေးကတော့ အရည်တရွဲရွဲနဲ့ ကျွန် တော့်ကို ကြိုနေလေရဲ့။ မြန်မာမိန်းကလေးပီပီ ပစ္စည်းကတော့ ညိုညစ်ညစ်ပါပဲ။ ကျွန်တော်တံတွေးကို မြိုချလိုက်တယ်။ မွန်နေတဲ့ တဏှာစိတ်ကြောင့် သူ့ အမျိုးသမီးပစ္စည်းကို လျှာနဲ့ ကလိမယ်၊ စုပ်မယ်ပေါ့လေ။ ခေတ်စကားနဲ့ပြောရင် ဘာဂျာပေါ့။ အနားကပ်လိုက်တော့ ပုပ်ညှီညှီလေးဗျ။ အေးလေ မထင်မှတ် ဘဲ အိပ်ယာပေါ်ရောက်သွားတာဆိုတော့ သူလည်း ဘယ်ပြင်ဆင်ထားပါ့မလဲ။ နောက်မှ အားရပါးရ မွုတ်တော့မယ်။
သူ့ဘေးကို ပြန်လှဲပြီး ကိုယ်တုံးလုံးဖြစ်နေတဲ့ သူ့ကို ရင်ခွင်ထဲ ဆွဲသွင်းပြီး ကျွန်တော့် ပုဆိုးကို ချွတ်လိုက်တယ်။ ပစ္စည်းကိုလည်း သူ့လက်ထဲ ထည့် ပေးလိုက်တော့ မလုပ်တတ် လုပ်တတ် နဲ့ ဂွင်းတိုက်ပေးနေတယ်။ “အကြီးကြီးပဲနော်” တဲ့ ပြောပြီး ကျွန်တော့်ဟာကို မရဲတရဲ ခိုးကြည့်နေတယ်။ ကျွန်တော် လည်း အလိုက်သင့် သူ့ပေါင်ကြားထဲ ညာလက်ကို ထည့်ပြီး သူ့ပစ္စည်းကို လက်ညိုးလက်ခလယ်နဲ့ မွေတော့တာပဲ။ အားပါးပါး။ ထန်လိုက်တဲ့ ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်း။ ပစ္စည်းကို မွေတာနဲ့ အလိုလို ပေါင်က ကားတက်လာတာ။ ကျွန်တော့် တုတ်ကိုလည်း ညှစ်လိုက်တာဗျာ သူ့လက်က။ ပါးစပ်ကလည်း ညည်း လိုက်တာစုံလို့။ မောင်ရယ် ဆိုတာတောင် ပါသေးတယ်။ တစ်ချက်တစ်ချက် သူ အကြောဆွဲတယ်တောင် ထင်တယ်။ “ငါတို့ ချစ်ကြတော့မယ်နော် နွယ်နီ” လို့ သူ့မျက်နှာကို ကြည့်ပြီး ပြောလိုက်တယ်။
ကျွန်တော့် လည်ကုတ်ကို ဆွဲဖက်ပြီး “မသိဘူးဟာ” ဆိုပြီး တစ်ခွန်းထဲ ပြောလို့ ကျွန်တော့်ကို တက်တက်မက်မက်ကြည့်နေတယ်။ ဒီလောက်ဆို လုံလောက် ပြီ။ ဘယ်မိန်းကလေးကမှ အောစာအုပ်ထဲကလို လိုးပါတော့ ရှင်ရယ် ဘာညာ မပြောဘူးဗျ။ ကျွန်တော့် ဗီရိုထဲက ကွန်ဒုံးအကောင်းစားလေး တစ်ခုကို ထယူ လိုက်တယ်။ ထလိုက်တော့ ဖင်ပြောင်တာ သူငယ်ချင်းမရှေ့ နဲနဲတော့ ရှက်သား။ ဒီမှာ တလက်စတည်း ခင်ဗျားတို့ကို ပြောချင်သေးတယ်။ သူများသားသမီး ကို မယူရသေးခင် ကိုင် မယ်ဆိုရင် အကောင်းဆုံးက ကွန်ဒုံးပဲဗျ။ သန္ဓေတားဆေးတွေက အမျိုးသမီးတွေကို ဟိုမုန်းအပြောင်းအလဲ ဖြစ်စေတယ်။ အလှ ပျက်တာတွေ၊ ကိုယအလေးချိတ်တက်တာတွေဖြစ်တယ်။ အရေးပေါ် တားဆေးတွေဆို ပိုဆိုးတယ်။ မတားရင်လည်း မတော်တဆကိုယ်ဝန်ရရင် လူမွုရေး အရှုပ်အထွေးတွေ ဖြစ်လာမယ်။ ကွန်ဒုံးသုံးတာ ဖီးတော့ နည်းနည်းပျက်တာပေါ့ဗျာ။ ဒါပေမဲ့ နှစ်ယောက်လုံးအတွက် ကျန်းမာရေး၊ လူမွုရေး လုံခြုံတယ်။ စွပ်ဖို့ မပျင်းကြနဲ့ ကိုယ့်ဆရာများ။
မာဂလောင်နေတဲ့ ကျွန်တော့်ဟာကို လွယ်လင့်တကူပဲ စွပ်လိုက်တယ်။ ကိုယ့်ကောင်ကလည်း ဘယ်လောက်တောင် ထန်နေတယ်မသိ ခါရမ်းနေတာပဲ။ သူ့ ပစ္စည်းဝလေးကို ထပြီး တေ့လိုက်တယ်။ “အားးးး…ရှီး…နာတယ် နာတယ်” ဖြည်းဖြည်းချင်း အဝလေးပဲ ချော့ထည့်လိုက်တယ်။ အစပိုင်းတော့ ဖြည်းဖြည်းချင်းပဲ ပေါ်ကနေ ညှောင့်ရင်း ချော့ထည့်ရတာပေါ့။ သူကတော့ ကျွန်တော့်အိပ်ရာခင်းကို အားကုတ်ဆွဲကုပ်ပြီး ကိုင်ထားတယ်။ စီးပိုင်ပြီး ဖြည်းဖြည်းချင်းဝင်သွားတဲ့ ကျွန်တော့်ပစ္စည်းကို သူ့ဟာလေးက အထဲကနေ ညှစ်နေတယ်။ ကောင်းလိုက်တာများဗျာ စာနဲ့တောင် မရေးပြတက်ဘူး။ “ငါ့ ကို ဖက်ထားပါနွယ်နီ” သူကျွန်တော့်ခါးကို ဆွဲဖက်တယ်။ မျက်နှာကို အောက်ငုံလိုက်ရင်း သူ့ပါးလေးကို နမ်းလိုက် အောက်က လုပ်လိုက်နဲ့ တကယ့် ကာမ စည်းစိမ် ပါပဲ။ နို့လေးကိုလည်း မထိတထိ လှမ်းလှမ်းဟပ်တယ်။ ၃ မိနစ်လောက် ဆောင့်ပြီးတဲ့အခါ သူအောက်နေ ပြန်တုန့်ပြန်နေတယ်။ အပေါ်ကဆောင့် ၊ အောက်ကဆောင့်ပေါ့လေ။ နွယ်နီပြီးတော့မယ်ထင်တယ်။ သူ့အသက်ရှူသံတွေ ပြင်းလာပြီး၊ ညည်းသံတွေလည်း တဖြည်းဖြည်း ကျယ်လာတယ်။
“ငစည် မြန်မြန်လုပ်ပေးပါ ချစ်ရယ်” “နင်ပြီးတော့မှာလား” “မသိဘူးဟာ” ကျွန်တော်လည်း အားရပါးရ ဆက်တိုက်ဆောင့်ပေးတယ်။ ကိုယ်ပြီးသွားမှာ လည်း ကြောက်လို့ ထိန်းရသေးတယ်။ ကားထားပေးတဲ့ နွယ်နီ့ခြေထောက်ဟာရုတ်တရက် ထောင်တက်လာပြီး ကျွန်တော့်ခါးကို ခွပြီး ဖက်လိုက်တယ်။ အထဲက သူ့သားအိပ်ဝကလည်း လွုပ်လိုက်တာ ကျွန်တော့်ဟာကို မြွေမြိုနေသလိုပဲ။ ကျွန်တော့်ပါးကို အလုအယက်နမ်းနေပြီး တုန်တက်လာတဲ့ သူ့အသား တွေကို ကြည့်ပြီး သူပြီးသွားမှန်း ကျွန်တော်သိလိုက်ပါပြီ။ ကျွန်တော်လည်း စိတ်ကို လွတ်ပေးလိုက်တယ်။ နောက်အချက် ၂၀ လောက် ဆောင့်လိုက်ရော ကျွန်တော်လည်း ပြီးထွက်သွားတယ်။ ဘာနဲ့မှမတူတဲ့ အရသာ။ ကျွန်တော့် ခုတင်ဆို တဝုန်းဝုန်းနဲ့ဗျ။ သူ့အပေါ်မှာပဲ ခဏ စိမ်နေသေးတယ်။ အကြာကြီး တော့ နေလို့မဖြစ်။ ကွန်ဒုံးကို ထချွတ်ရသေးတာကိုး။ ပြီးတော့ ကိုယ်တုံးလုံးနဲ့ပဲ သူ့ဘေးနားလှဲပြီး နွယ်နီ့ကို ရင်ခွင်ထဲ ဆွဲသွင်းထားတယ်။
“နင်ကောင်းရဲ့လား နွယ်နီ” မသိဘူးဟာ ဆိုတဲ့ တစ်ခွန်းထဲ ပြောပြီး ကျွန်တော့်ရင်ခွင်ထဲမျက်နှာကို ဝှက်ထားတယ်။ သူ့နဖူးကို ငုံနမ်းပြီး ချွဲတွေရွဲနေတဲ့ ဆံနွယ် လေးတွေကို သုတ်ပေးလိုက်တယ်။ ပြောမနာဆိုမနာ မောင်နှမလို သူငယ်ချင်းန်ှစ်ယောက် ခုတော့ အိပ်ရာပေါ်မှာ ဝတ်လစ်စလစ်နဲ့။ ရင်ခုန်တာ ခုထိကို မရပ် သေးဘူး။ သူကတော့ ရင်ခွင်ထဲမှာ ကျွန်တော့်ရင်ဘတ်ကို ခိုးနမ်းနေတယ်။ ပြီးပါပြီ။